Inopa Metal Detector Gate, Metal Detector Gate For Security Check Kubva kuChina Manufacturer
Tsanangudzo:Metal Detector Gate,Metal Detector Gate For Airport,Walkthrough Metal Detector,Metal Detector Gate For Security Check,,
Home > Products > Walk Through Metal Detector > Metal Detector Gate
Zvigadzirwa zve Metal Detector Gate , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Metal Detector Gate , Metal Detector Gate For Airport vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Walkthrough Metal Detector R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Fungsi inofamba nesimbi detector  Bata Ikozvino
Famba nepasimbi detector specification  Bata Ikozvino
Famba nepasimbi detector gate  Bata Ikozvino
Yakazara muviri wechina detectors  Bata Ikozvino
detector de metale (MS-6006)  Bata Ikozvino
Kwete Garrett paunofamba achifamba nemudhina  Bata Ikozvino
high quanlity inofamba nesimbi detector  Bata Ikozvino
musuo fomu kufamba nesimbi detector  Bata Ikozvino
Zvematongerwo enyika anofamba nesimbi detector  Bata Ikozvino
famba nesimbi detector security gate  Bata Ikozvino
Packaging: Paper carton,, Wooden shelf, full Wooden carton (mamwe mari RMB200 / seti)
Kupa Mazano: 1800Sets/Month, 3 days
MS-6006 nhanhatu nhepfenyuro yemari LCD kufamba-kuburikidza nesimbi detector Chirongwa Chekutanga: Zvisarudzo 8 kana 10 nzvimbo dzekucherechedza dzine chiedza chakakwirira Chiratidzo che LED chekugadzira zvigadzirwa zvakanyatsonaka. smith metal...
MS-6006 nhanhatu nhepfenyuro yemari LCD kufamba-kuburikidza nesimbi detector Chirongwa Chekutanga: Zvisarudzo 8 kana 10 nzvimbo dzekucherechedza dzine chiedza chakakwirira Chiratidzo che LED chekugadzira zvigadzirwa zvakanyatsonaka. famba nesimbi...
Unit Price: USD 285 / Set/Sets
Kupa Mazano: 800Sets/Month, 5 days
MS-1006 nharaunda nhanhatu dzinoshanda digital kufamba-kuburikidza nesimbi detector (Silver & gray) Chirongwa Chekutanga Pamusoro, pasi, simute alarm mode inogona kugadziriswa panguva dzakasiyana maererano nezvinodiwa. famba musimbi detector. ■...
MS-6006 nhanhatu nhepfenyuro yemari LCD kufamba-kuburikidza nesimbi detector Chirongwa Chekutanga: Zvisarudzo 8 kana 10 nzvimbo dzekucherechedza dzine chiedza chakakwirira Chiratidzo che LED chekugadzira zvigadzirwa zvakanyatsonaka. Door Frame Metal...
MS-1006 nharaunda nhanhatu dzinoshanda digital kufamba-kuburikidza nesimbi detector (Silver & gray) Chirongwa Chekutanga: Pamusoro, pasi, simute alarm mode inogona kugadziriswa panguva dzakasiyana maererano nezvinodiwa. ■ Zvirongwa zveParamende...
Unit Price: USD 330 / Set/Sets
Kupa Mazano: 1060Sets/Month, 7 days
MS-2006 Nhamba dzitanhatu dzakakwana digitairi-kufamba nesimbi detector (Silver & gray ) Chirongwa Chekutanga: Kunzwisisika kwenzvimbo imwe neimwe yekucherechedza kunogona kugadziriswa pasina chekuita pakati pe 0-99. Walk Through Metal Detector,...
Unit Price: USD 435 / Set/Sets
Kupa Mazano: 1100Sets/Month, 6 days
MS-8006 nzvimbo nhatu mvura-chipupuriro LCD kufamba-kuburikidza nesimbi detector Chirongwa Chekutanga: Kunopfuura imwe mikova inogona kushanda pamwe chete, makumi makumi maviri anogadza mikova muboka. Digital control pamusoro pemakombiyuta. ■...
MS-6006 nhanhatu nhepfenyuro yemari LCD kufamba-kuburikidza nesimbi detector Chirongwa Chekutanga: Zvisarudzo 8 kana 10 nzvimbo dzekucherechedza dzine chiedza chakakwirira Chiratidzo che LED chekugadzira zvigadzirwa zvakanyatsonaka. Zviteteti &...
China Metal Detector Gate Vatengi
Zvakanaka, zviri nyore kudana chigadzirwa chakadai sesimbi detector gate. Chinese metal detector mikova yakagamuchirwa noushamwari pasi rose. Archway metal detector gonhi inodzivirira hupenyu hwevanhu kubva pakurwadzisa uye pfuma iri kukuvadzwa nehugandanga. ChiShayina Hamba kuburikidza nesimbi detector isakoshi asiwo yakanaka pakushandiswa. Uyewo kupa 1 warranty year, inofanirwa nesarudzo yako!
Metal Detector Gate Metal Detector Gate For Airport Walkthrough Metal Detector Metal Detector Gate For Security Check Okm Metal Detector Gate